SpiritBoom – mangalatra&Hack – Torohevitra Android Cheats
SpiritBoom – mangalatra&Hack
EspritBoom dia lalao maminavina piozila vaovao. Ho gaga ianao amin'ny lojika tsy mahazatra amin'ny famahana ny rebus tsirairay. Raha hendry ianao ary mihaino ny antsipiriany, hanana fotoana miala sasatra sy mahafinaritra ianao hamaha piozila., tsy maintsy mampiofana ny atidohanao ianao hamaha ireo piozila sarotra amin'ny alàlan'ny fisainana samihafa. Ny vola madinika dia tena ilaina amin'ny lalao, azo ampiasaina hividianana toro-hevitra sarobidy izy ireo.
Ahoana ny filalaovana:
• Vakio ny ankamantatra ary fantaro ny valiny.
• Ataovy milamina tsara ny litera ao amin'ny bloc ary tsipelina ireo teny miafina.
• Tany am-piandohana, piozila tsotra ireo, fa hitombo ny fahasarotana rehefa mitombo ny haavony.
• 4 karazana tricks clue dia hanampy anao hamaha piozila sarotra: esory ny litera tsy azo antoka rehetra ao amin'ny sakana, mampiseho litera kisendrasendra, asehoy ny litera misy sakana iray manokana,ary asehoy farafaharatsiny 3 taratasy.
• Mandany vola madinika ny fividianana ny fanoroana hevitra ary azonao atao ny mahazo ny valisoa mifanaraka amin'izany amin'ny vola madinika isaky ny mandalo ny ambaratonga ianao.
★ Mora milalao ary azo fehezina amin'ny tanana iray
★ ambaratonga goavana miandry anao hilalao.
★ Tsy mila tambajotra : miala voly amin'ny tontolon'ny ankamantatra sy piozila!
★ Amin'ny toe-javatra raikitra, azonao atao ny mampiasa vola madinika hividianana famantarana hahitana ny valiny.
★ Arakaraka ny hahatongavanao amin'ny ambaratonga manaraka, ny sarotra kokoa sy mahaliana!
★ Ambaratonga teny sarotra, manentana sy mahaliana.
★ Mahazoa famantarana maimaim-poana isan'andro ary mamaha piozila miaraka amin'ny valiny.
Raha olona mitodika amin'ny antsipiriany koa ianao, izay misaina tsara sy tia mamaha piozila, noho izany dia manoro hevitra anao aho mba hiara-milalao EspritBoom miaraka amin'ny namanao ary ho marani-tsaina kokoa noho ny olon-kafa !
EspritBoom dia lalao maminavina piozila vaovao. Ho gaga ianao amin'ny lojika tsy mahazatra amin'ny famahana ny rebus tsirairay. Raha hendry ianao ary mihaino ny antsipiriany, hanana fotoana miala sasatra sy mahafinaritra ianao hamaha piozila. Mazava ho azy, tsy maintsy mampiofana ny atidohanao ianao hamaha ireo piozila sarotra amin'ny alàlan'ny Divergent Thinking. Ny vola madinika dia tsy maintsy ananana amin'ny lalao, azo ampiasaina hividianana toro-hevitra sarobidy izy ireo.
• Apetraho amin'ny filaharana marina ireo litera ao amin'ny bloc ary tsipelina ireo teny miafina.
• piozila tsotra ireo amin'ny voalohany, fa hitombo ny fahasarotana rehefa mitombo ny haavony.
• 4 karazana tricks clue dia hanampy anao hamaha piozila sarotra: esory ny litera tsy azo antoka rehetra ao amin'ny sakana, mampiseho litera kisendrasendra, mampiseho litera avy amina sakana iray manokana, ary asehoy farafaharatsiny 3 taratasy.
• Mandany vola madinika ny fividianana fanoroana famantarana ary azonao atao ny mahazo ny valisoa mifanaraka amin'izany amin'ny vola madinika isaky ny mandalo ny ambaratonga ianao.
★ Tsy mila tambajotra: miala voly amin'ny tontolon'ny ankamantatra sy piozila!
★ Amin'ny toe-javatra raikitra, azonao atao ny mampiasa vola madinika hividianana famantarana mba hahitana ny valiny.
★ Arakaraka ny hahatongavanao amin'ny ambaratonga farany, ny sarotra sy mahaliana kokoa izany!
★ Sarotra, ambaratonga teny sarotra sy mahaliana.
Raha toa ianao ka olona mandinika ny antsipiriany, mieritreritra tsara ary mankafy ny famahana piozila, dia manoro hevitra anao aho mba hiara-milalao EspritBoom miaraka amin'ny namanao ary ho marani-tsaina kokoa noho ny olon-kafa!
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: CheatsHack, SpiritBoom
← Fashion Princess – mangalatra&Hack Ady Epika: fiandrianana – mangalatra&Hack →